ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: May 2010
နအဖ အစိုးရက ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ရေမီးအစုံအလင်နဲ့ လိုလေသေးမရှိ ထားပေးပုံ..လေ။
ရန်ကုန်မြို့ လမ်းရေလျှံ (ဓါတ်ပုံမူရင်း Link).............................မင်္ဂလာဈေးမီးလောင် (ဓါတ်ပုံမူရင်း Link)....
ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ရုံနဲ့ ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ ဒုက္ခကို ခံစားကြည့်လို့ရတယ်။
နအဖ အစိုးရ တက်လာကာစတုန်းက နာမည်ကျော် စာရေးဆရာတယောက်က ရေးတယ်။ “နအဖ အစိုးရလက်ထက်မှာ ရေမီးအစုံနဲ့ ထားပေးတယ်။ နွေဆိုရင် မီးလောင်တယ်။ မိုးတွင်းဆို ရေကြီးသတဲ့။” အဝေဖန်မခံနိုင်တဲ့ နအဖက မျက်မာန်တော်ရှလို့ အဲဒီစာရေးဆရာကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချထားခဲ့သေးတယ်။ အခု အနှစ် နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာလည်း ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါပဲ။ အခြေအနေတွေက တနေ့တခြား ပိုတောင် ဆုတ်ယုတ်လာသေးတယ်။ “ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့” ဆိုတဲ့ နအဖရဲ့ ဝါဒမှိုင်းတိုက်တဲ့ ကြွေးကြော်သံကို ကြားရတာ နားကလော လှပါတယ်။
“ရန်သူမျိုး ငါးပါးမဟုတ်တော့ဘူး။ သုံးပါးပဲ ရှိတော့တယ်။ နောက်ဆုံးသုံးပါးက အတူတူဖြစ်သွားလို့ ” ဆိုတဲ့ စကားလေးကိုသာ သတိရမိပါရဲ့။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, May 30, 2010
Labels: in the news Comments: (14)
ပေးထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုပြီး ဝါကျတည်ဆောက်ခိုင်းတာမျိုး ငယ်ငယ်က ကျောင်းသားဘဝမှာ လုပ်ခဲ့ကြဖူးမှာပေါ့။ ကျနော်ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ တချို့သော ပြုံးချင်စရာ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံလေးတွေကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။
သာယာ။........။ ကျမသည် သာယာပါသည်။ (ဗုဒ္ဓေါ)
တခစ်ခစ်။.........။ ကျနော်သည် ညက သတင်းနားမထောင်လိုက်ရသဖြင့် တခစ်ခစ်နောက်ကျ သွားသည်။ (တခေတ် ခေတ်နောက်ကျသွားသည် လို့ နားလည်ပါရန်။)
နောက်တမျိုးက သတ်ပုံမှားကြတာ။ တယောက်ဆိုရင် အမျိုးသားနေ့ဘယ်နေ့လဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေထားပုံက “တဆောင်မိုလပြိုကျို ဆယ်ရက်” ဆိုတာမျိုး။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း စာလုံးပေါင်းထည့်လိုက်သည်မသိ။
ကျနော်တို့ဇာတိ လယ်ကိုင်း၊ ကျောင်းတော်ရာ၊ ကုန်းဇောင်းဖက်မှာ လေယူလေသိမ်းနဲ့ အသံထွက်တွေက တခြားအရပ်တွေနဲ့မတူဘူး။ ဆရာဝန် ဆိုရင် ဆရာဝင်၊ ဝန်ကြီးဆိုရင် ဝင်ကြီး အဲသည်လို အသံထွက်တယ်။ အခုထိလည်း အဲသည်လိုပဲ ထွက်နေလို့ မဒမ်ပေါက မကြာခဏ ဟားတာကို ခံရတယ်။ ယပ်တောင် ဆိုရင်လည်း ယက်တောင် လို့ အသံထွက်ကြတာပါ။
အသံထွက်မှားတော့ တချို့တွေလည်း စာလုံးပေါင်းတဲ့နေရာမှာပါ လိုက်မှားကြတယ်။ ဟင်္သာတ ဖက်က ကျနော့်အသိတယောက်ဆိုရင် “ပတ်ဝန်းကျင်” ကို ပြောတဲ့အခါ “ပဝန်းကျင်” ဆိုတဲ့ အသံမျိုးနဲ့ ပြောရုံမက ရေးတဲ့အခါမှာပါ ပဝန်းကျင်လို့ မှားရေးတာကို ကြုံဖူးတယ်။
ကျနော်တို့မူလတန်းတက်နေတုန်း အတန်းဖော် ကောင်မလေးတယောက် ဆရာ့ဆီမှာ သတ်ပုံစစ်ဖို့ (ကျောက်သင်ပုန်း) သွားထပ်တဲ့အခါ ယပ်တောင်ကို ယက်တောင်လို့ မှားရေးထားတာကို ဆရာက တွေ့သွားတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဆရာက ချက်ချင်း သူ့စားပွဲမှာတင် အဲဒီကျောင်းသူကို အသံထွက် ပြင်ပေးဖို့ ကြိုးစားတယ်။
ဆရာ။.........။ ယက်တောင် မဟုတ်ဘူး။ ပြန်ဆို ယပ်တောင်။
ဆရာ။..........။ ဆိုစမ်း….. ယပ်။
ကျောင်းသူ (အသံတုန်ရီစွာဖြင့်)။.........။ ယက်
ဆရာ (စိတ်မရှည်စွာဖြင့်)။.............။ကဲ… နင်အခု ငါ့ရှေ့မှာ ထိုင်နေတာလား။ ရပ်နေတာလား။
ကျနော်တို့မှာ ရယ်ချင်လွန်းပေမယ့် မရယ်ရဲဘူး။ ဆရာက အရိုက်ကြမ်းလို့။ အသာ မျက်နှာသေလေးတွေနဲ့ အပိုးသတ်ပြီး ငြိမ်နေရတယ်။
တခါ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းတွေ အကြာကြီး ပိတ်ထားလို့ ရွာမှာ ပြန်နေတုန်း အမျိုးတွေ အဆွေတွေ တိုက်တွန်းတာနဲ့ ကလေးတွေကို အိမ်မှာ စာသင်ပေးဖူးတယ်။ ပထမတော့ ဝမ်းကွဲတွေရဲ့ သားသမီး သုံးလေးယောက်ကို သင်ပေးရာကနေ နောက်တော့ တဆင့်စကား တဆင့်နားနဲ့ ရွာထဲက ကလေးတွေ အယောက် ၂၀ လောက်ကို စာသင်ပေးရပါတယ်။ ကလေးတွေကလည်း နှပ်ချေးတွဲလောင်းအရွယ်ကနေ သုံးတန်း လေးတန်း အရွယ်အထိ အရွယ်စုံ အမျိုးစုံပါတယ်။ တချို့လည်း ကလေးထိန်းရသက်သာပြီးရော သဘောနဲ့ ပို့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာသင်ဖို့ အလာလမ်းမှာတော့ သူတို့ မိဘ တွေက ရေမိုးချိုး ဖီးလိမ်းပြင်ဆင်ပေးလိုက်လို့ ချစ်စရာလေးတွေ။ ကျနော့်ဆီက ပြန်သွားရင်တော့ ကြောင်ဂျီးရုပ်နဲ့ပဲ။
နှစ်ထပ်အိမ် အပေါ်ထပ်မှာ စာသင်တာ ဘယ်လိုလုပ် ကြောင်ဂျီးရုပ်ပေါက်သွားသလဲလို့ မေးစရာရှိတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကျေးဇူးရှင်လေးတွေက ဆယ်မိနစ် တခါလောက် ကျနော့်ရှေ့မှာ လက်ညိုး လာထောင်ကြတယ်။ “ကိုကြီးနိုင်မိုး….သေးပေါက်ချင်လို့” “ကိုကြီးနိုင်မိုး အိမ်သာသွားချင်လို့”။ အဲသည်လို ခဏခဏ ဆင်းကြတယ်။ ကျနော် အိမ်ပေါ်ပြတင်းပေါက်က မသိမသာ ချောင်းကြည့်လိုက်ရင် ဒီကောင်တွေ ခြံထဲက မန်ကျည်းပင်အောက် မြေပြင်မှာ ဆော့ကစားနေမယ်။ လမ်းက ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကို ငေးမောကြည့်ကြမယ်။ လှိုင်မြင့်ဦးဆိုတဲ့ သုံးနှစ်သာသာ တူကလေးတစ်ယောက်ကို အခုထိ မှတ်မိသေးတယ်။ ကျနော့်ရှေ့မှာလာပြီး မကြာခဏ လာပြီး လက်ညိုးထောင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လေးပေါ့။ ရုပ်ကလေးကလည်း မျက်လုံးမှေးမှေးနဲ့ ညစ်ကျယ်ကျယ်လေး။ တခါတလေကျတော့လည်း ကျနော်က စိတ်မရှည်တဲ့အလျောက် “ဟိတ်ကောင်၊ မသွားနဲ့ကွာ။ မသွားရဘူးကွာ” လို့ ဟောက်လွှတ်လိုက်တယ်။ အဲဒါကို ကျေးဇူးရှင်က အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ သူ့အမေအဖေတွေကို ကျနော့်လေသံအတိုင်း ပြန်သရုပ်ဆောင်ပြသတဲ့။ သူ့မိဘတွေ ပြန်ပြောပြလို့ သိရတာပါ။
ထူးထူးခြားခြား အင်မတန် ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကလေး နှစ်ယောက်လောက်ကိုလည်း သတိထားမိသေးတယ်။ အဲ…. ကျနော် ကျောင်းဆရာ လုပ်ချင်စိတ်ကုန်သွားလောက်အောင် တတ်နိုင်တဲ့ တပည့်မ တယောက်လည်း ပါလာတယ် ခင်ဗျ။ သူနဲ့ကျမှ ကျနော်ဟာ ကျောင်းဆရာ ပါရမီ မပါ ပါကလားလို့ ကိုယ့်ဘာသာ သဘောပေါက်သွားတဲ့အလျောက် စာသင်ခြင်းအမှုကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစာရင်းထဲကနေ အပြီးတိုင် ထုတ်ပယ်လိုက်ရပါတော့တယ်။
ဒီလိုပါ…. မူလတန်း မြန်မာစာဖတ်စာထဲမှာပါတဲ့ “ပျိုမေတသင်း လယ်ထဲဆင်းမည်။ ပျိုးပင်များလည်း သယ်လာကြ၏” ဆိုတဲ့ စာကို သင်တဲ့အခါ အဲဒီတပည့်မက ပျိုမေ နဲ့ ပျိုးပင်ကို ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ရောထွေးသွားတယ်မသိ။ “ပျိုမေ”ကို “ပျိုးမေ” လို့ချည်း ဖတ်နေတယ်။ ကျနော် ရှေ့ကနေ ဘယ်လိုပြင်ပေးပေး ပြင်လို့မရဘူး။
“လိုက်ဆို…. ပစောက်ယပင့် လုံးကြီးတင် တချောင်းငင် ပျို။”
“ပစောက်ယပင့် လုံးကြီးတင် တချောင်ငင် ပျို။”
“သဝေထိုး မရေ မေ။”
ဘယ်လိုမှကို ပြင်လို့မရပါဘူး။ ပျိုးမေချည်း ဖတ်တယ်။ ကျနော့်အဖို့ အကြံအိုက်ပြီး စိတ်အရမ်းညစ်ရတဲ့ ကာလတွေပေါ့။ သူ့ကို စာသင်ရတာ ငိုတောင်ငိုချင်တယ်။ စောစောက “ယက်တောင်” ပြင်တဲ့ဆရာကိုလည်း ကိုယ်ချင်းစာမိပါရဲ့။
နောက်ဆုံးတော့ ကျနော် ကိုပေါ လက်မြှောက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ကို ပျိုးမေလို့ပဲ လွတ်လပ်စွာ ပေးဖတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျနော်လည်း ကလေးတွေကို စာမသင်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဗဒင်သီချင်းတွေ ခေတ်စားလာတော့ ကျနော့်တပည့်မ သီချင်းကို ဘယ်လို လိုက်ဆိုမလဲဆိုတာသာ စိတ်ဝင်စားမိပါတော့တယ်။
Posted by ကိုပေါ on Friday, May 28, 2010
ဓါတ်ပုံကို ဒီက ယူပါတယ်။
ဧရာဝတီအွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ တင်ထားတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး အင်တာဗျူးအောက်က ကွန်မင့်တွေကို လျှောက်ဖတ်ရင်း ကွန်မင့်တခုကိုတွေ့တော့ အသံထွက်အောင် ရယ်မိပါတယ်။ ထွန်းလှ ဆိုသူရဲ့ ကွန်မင့်မှာ…..
“များလိုက်တဲ့ ကွန်မင့်တွေ၊ ဒေါက်တာဇာနည်ကို ထက်ထက်တို့က ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်”…. တဲ့။
သူပြောလည်း ပြောစရာပါပဲ။ ကျနော် ညွှန်းထားတဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်ရဲ့ ပို့စ်တွေမှာ သွားကြည့်ရင်တောင် ကွန်မင့်က ဆယ်ဂဏန်းပဲ ရှိတယ်။ မြန်မာတွေပဲ အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါးတွေကို သိပ်မဖတ်ဖြစ်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေးကိုပဲ စိတ်မစားကြလို့လား။
ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ ဆိုရင်လည်း “ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ သူတို့တတွေ” ပို့စ်ကို တင်လိုက်တဲ့အခါ လာရောက်ဖတ်ရှုသူအရေအတွက်ဟာ မကြုံစဖူး ထိုးတက်သွားပါတယ်။ ထက်ထက်အရောင်နဲ့ ပါးပြောင်သွားတဲ့ သဘောပေါ့။ နာမည်ကြီးမင်းသား၊ မင်းသမီးတွေနောက် မီဒီယာတွေ ဘာကြောင့် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်နေရသလဲဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း ပိုပြီး နားလည်သဘောပေါက် သွားပါတော့တယ်။
အဲဒီပို့စ်မှာ စာဖတ်သူတွေရဲ့ မှတ်ချက်တွေကိုလည်း အတော်များများ ရလိုက်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ထက်ထက်မိုးဦး လွန်တယ်၊ မလွန်ဘူး ဆိုတဲ့အချက်ကို အသားပေး ရေးကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်က မဒမ်ပေါကို ညည်းပြမိတယ်။ ဘလော့ဂ် လာဖတ်တဲ့လူတွေ ကျနော်ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို မရဘူးထင်တယ်လို့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအပေါ်မှာ ပို့စ်တပုဒ် သီးသန့် ရေးချင်လောက်တဲ့အထိတော့ တွန်းအားဖြစ်မလာပါဘူး။
ဒီနေ့မနက်တော့ ညီလင်းဆက်ဘလော့ဂ်က “ထက်ထက်မိုးဦး တကယ်ပဲ မလွန်ဘူးလား” ပို့စ်ကို သွားဖတ်ဖြစ်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သူရေးထားတာလေးတွေကို ဖတ်ရင်းနဲ့ သဘောကျနေတုန်း ပို့စ်တဝက်လောက်ရောက်တော့… “ကိုပေါတို့လို အမာခံ ပရိသတ်တွေကလည်း ဒါကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံကြပြန်တယ်”…. ဆိုတာတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ ညက အိပ်ရေးမဝလို့ မှေးစင်းနေတဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံးဟာ လင်းကွင်းလောက် ပြူးထွက်လာပါတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း “ဟဲ့၊ ပလုပ်တုတ်” လို့ အာမေဋိတ်သံ ထွက်သွားပါတော့တယ်။
ကျနော်ရေးတဲ့ပို့စ်ကို အသေအချာ ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ပါးရိုက်တဲ့လုပ်ရပ် မှန်တယ်၊ မှားတယ်ဆိုတာထက် အဲဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် ထက်ထက်မိုးဦး နာမည်ကျသွားနိုင်တယ်လို့ ပြောနေကြသူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်ဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ဥပမာအချို့နဲ့ ပထမဦးဆုံး သက်သေပြတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ လူတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင် မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု၊ ကျင်လည်ရာ ပညာရပ်နယ်ပယ်တွေမှာ အကောင်းဆုံးလူတွေအဖြစ်၊ ကျော်ကြားတဲ့လူတွေအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ဦးတည် ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေ မှန်ကန်ကြောင်းကိုလည်း ထက်ထက်မိုးဦးကို ဆက်လက် အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ မှတ်ချက်တွေနဲ့ ညီလင်းဆက်ရဲ့ စစ်တမ်းအရ ကြည့်ရင်ပဲ ထင်ထင်ရှားရှား သိသာနိုင်ပါတယ်။
အရင်ပို့စ်ထဲမှာ အဲဒီလို ကိုယ်ထိလက်ရောက် (စိတ်လိုက်မာန်ပါ) လုပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့ဖူးသော်လည်း ဆက်လက်ကျော်ကြား အောင်မြင်နေခဲ့သူတွေထဲက ဥပမာအနေနဲ့ မာရာဒိုနာနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဥပမာပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဥပမာပေးတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ကျနော်က ထောက်ခံရေးသားရာရောက်တယ်လို့ မမြင်စေချင်တဲ့အလျောက်….. “ ဒီလိုရေးပြလို့ ထက်ထက်မိုးဦးတို့ မာရာဒိုနာတို့၊ ကိုအောင်ဆန်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တုန့်ပြန်ပုံကို မှန်တယ်လို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ ကျနော့်သဘောထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထည့်သွင်းရေးသားထားပါသေးတယ်။ ဒီကြားထဲကမှ ဒီပို့စ်ဟာ ထက်ထက်မိုးဦးမလွန်ပါ ဆိုတဲ့အဆိုကို အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲတာဟာ စာဖတ်သျှမ်းတာကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ကျနော်ကပဲ ရှင်းလင်းအောင်မရေးနိုင်တာလား ဝေခွဲမရအောင် ဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လွဲချက်က နာတာကြောင့် “မေ... ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်လဲ မတင်ချင်ပေ...အေ့...အေ” လို့သာ ငြီးတွားချင်ပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ ကျနော်ဟာ ကျနော်တို့ မနှစ်မြို့သူ စစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်သိန်းစိန်ကို မိုးသီးဇွန်တို့ ဖိနပ်နဲ့ ပစ်တဲ့လုပ်ရပ်ကိုတောင် ရှုတ်ချခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ လူထုအကြားမှာ ဗုံးဖောက်ခွဲတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို အစဉ်တစိုက် ဆန့်ကျင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တုန့်ပြန်မှုမှာလည်း မှန်ကန်တယ်လို့ မမြင်ပါဘူး။ အဲဒီအပြုအမူကို ထောက်ခံစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် အဲဒီလို ကိုယ်ထိလက်ရောက် တုန့်ပြန်တာမျိုးဆို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို လူမျိုးက (ကျောင်းသားကို ဆွဲထိုးဖို့ ) ကြိုးစားခဲ့တာတောင် မထောက်ခံသူပါ။ ဒါကြောင့် အဲဒီပို့စ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဥပမာကို တမင်ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလုပ်ရပ်ကို မထောက်ခံတာဘဲရှိပါတယ်။ ကျနော့်ပို့စ်မှာ ရေးခဲ့သလိုပဲ အဲဒီလုပ်ရပ်တခုတည်းက ထက်ထက်မိုးဦးအနုပညာကို အရိပ်မထိုးပါဘူး။ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ ပရိသတ်အဖြစ် ဆက်လက်အားပေးနေဦးမှာပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ အနုပညာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို ကျနော်က စည်းခြားထားလို့ပါပဲ။
အောက်ဆုံးမှာ စာကြွင်းအဖြစ် ထည့်လိုက်တဲ့ လစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်ကတော့ အရေးသိပ်မပါလှတဲ့ ကိစ္စမှာ သည်းသည်းလှုပ် နာနေကြတဲ့ မီဒီယာသမားတွေကို ကလိချင်တဲ့အတွက် သက်သက် အချပ်ပို ထည့်လိုက်တာပါ။
ပြဿနာတခုမှာ လူတွေရဲ့ တုန့်ပြန်တတ်ပုံ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကျနော့်အမြင်ကို နောက်ပိုင်းမှာ သီးသန့်ပို့စ်တခုအနေနဲ့ ရေးရန် စိတ်ကူးမိပါတယ်။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, May 27, 2010
Labels: general Comments: (27)
(ဓါတ်ပုံကို ဒီက ယူပါတယ်။)
တီဗီမှာ ကြော်ငြာတွေ ခေတ်စားကာစ ခေတ်က ထက်ထက်မိုးဦး ကြော်ငြာတခုလာတယ်။ ရေကူးကန်ဘေးမှာ ရေကူးဝတ်စုံကလေးနဲ့။ အဲဒီကြော်ငြာကို တောသူ အစ်မတယောက်က ကြည့်ပြီး ကျိတ်မနိုင်ခဲမရ ဟောသလို မှတ်ချက်ချတယ်။
“ကောင်မ၊ အရှက်ကို မရှိဘူး။ ဝတ်ထားလိုက်တာ ပေါ်တော့မယ်။ ကြည့်နေ၊ သူ ကြာကြာခံမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခဏလေးနဲ့ကို ကျမှာ..”
သူပြောတဲ့အထဲက “ခဏလေးနဲ့ကို ကျမှာ…” ဆိုတာ မကြာခင် စန်းကျသွားမှာ၊ မှေးမှိန်သွားမှာ လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။ အဲဒါကြားလိုက်တော့ “ဟ… ဘာဆိုင်လို့လဲ” လို့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ တွေးမိတယ်။ နှုတ်ကတော့ ထုတ်မပြောဖြစ်ပါဘူး။ ထုတ်မပြောဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက် အခု နောင်တရမိတယ်။ သူ့အထင်မှားသလား၊ မှန်သလားကတော့ အခုအချိန်အထိ ရွှေမင်းသမီး ထက်ထက်မိုးဦးတယောက် နာမည်ကြီးနေသေးတာကိုသာ ကြည့်ပါတော့။
အခုတလော ထက်ထက်မိုးဦးက သတင်းထောက်တယောက်ကို ပါးဆွဲရိုက်ဖို့ ကြိုးစားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးကြသားကြတဲ့နေရာမှာ “ဒီလို သတင်းသမားတွေအပေါ် ကိုယ်ချင်းမစာ စော်ကားရင် ရေရှည်မှာ ပရိသတ်က လက်ခံလိမ့်မယ် မထင်နဲ့” ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်မျိုးတွေ တွေ့နေရတယ်။ အဲဒီအခါ “ဟ… ဘာဆိုင်လို့လဲဟ” လို့ ထပ်ပြီး တွေးမိပြန်ပါတယ်။
စကားစပ်မိလို့ပြောရရင် အနုပညာသမားမဟုတ်တဲ့ နာမည်ကျော်ကြားသူတွေထဲက ဘောလုံးသမားအကျော်အမော် မာရာဒိုနာဆိုရင် ဓါတ်ပုံချောင်းရိုက်တဲ့ သတင်းထောက်ကို လေသေနတ်နဲ့တောင် လိုက်ပစ်သေးတာဆိုပဲ။ ဒါပေမယ့် မာရာဒိုနာ ယနေ့အထိ နာမည်ကြီးဆဲပါ။ မနေ့ကတောင် သူ့သတင်းကို ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ (မာရာဒိုနာ ပါတော်မူဖို့ အတွက် အဘိုးတန်အိမ်သာအိုး တပ်ဆင်ပေးလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်း။) ကုန်ကုန်ပြောရရင် လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတောင် ကျောင်းသားဘဝက စော်ကားမော်ကားပြောလာတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်ကို ဆွဲထိုးဖို့ ကြိုးစားသေးတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ကျနော်တို့ အခုထိ ကြည်ညိုလွန်းလို့ အလေးတောင် ပြုနေရသေးတယ် မဟုတ်ပါလား။
ဒီလိုရေးပြလို့ ထက်ထက်မိုးဦးတို့ မာရာဒိုနာတို့၊ ကိုအောင်ဆန်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် တုန့်ပြန်ပုံကို မှန်တယ်လို့ ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အနုပညာသမားဖြစ်စေ၊ အားကစားသမားဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်စေ သူတို့ရဲ့ အနုပညာအပေါ်မှာ၊ အားကစား စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မှာ၊ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအပေါ်မှာ ကြည့်ပြီး ပရိသတ်က၊ လူထုက အားပေးကြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ ဒေါသကြီးခြင်း၊ စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိခြင်း၊ အဆဲသန်ခြင်း၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြောတတ်ခြင်း၊ မာနကြီးခြင်း စတာလေးတွေကြောင့်ဖြင့် ကျရှုံးသွားတဲ့လူ အင်မတန်ရှားပါတယ်။ မနိုင်ရင် ပြိုင်ဖက်ရဲ့ နားရွက်ကို ဖမ်းကိုက်တတ်တဲ့ မိုက်တိုင်ဆင်ကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့လေ။
ကိုယ်ကျင့်တရား ဘယ်လောက်ကောင်းပါစေ၊ စိတ်နေစိတ်ထား ဘယ်လောက်ပင် နူးညံ့ပါစေ…. စန်းမရှိတဲ့အနုပညာသမားတွေ၊ အရည်အချင်းမရှိတဲ့ အားကစားသမားတွေ၊ ညံ့ဖျင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ တပုံတပင်ကြီးပါ။ တဖက်မှာလည်း ဆိုးသွမ်းနေပေမယ့်၊ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းပေမယ့် အနုပညာမှာ၊ စွမ်းဆောင်မှုမှာ သူမတူအောင် ကောင်းမွန်တဲ့ အနုပညာသမားတွေ၊ အားကစားသမား အကျော်အမော်တွေ ရှိနေပြန်ရော။
ကျောင်းဆရာတယောက်ဟာ သူကြိုက်တတ်လို့ အားလပ်ချိန် ညနေတိုင်းမှာ အရက်သောက်ချင်သောက်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘာသာရပ်မှာ အကောင်းဆုံး သင်ပြနိုင်သူတဦးဖြစ်ခဲ့ရင် အဲဒီလူကို ကျောင်းဆရာကောင်းတယောက်အနေနဲ့ ကျနော်သတ်မှတ်တယ်။ ဆရာဝန်တယောက် ဝါသနာပါလို့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာ ချိန်းဝိုင်းတွေလှည့်ပြီး ဖဲရိုက်တတ်သူဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့လူနာတွေအပေါ်မှာ စောင့်ရှောက်တယ်၊ ဂရုတစိုက် ကျွမ်းကျင်စွာ ကုသပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကောင်းတယောက်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဝသီအရ အဆဲသန်တဲ့ တရားသူကြီးတယောက်ဟာ တရားခွင်မှာ ဥပဒေနဲ့အညီ တရားသဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဆိုရင် တရားသူကြီးကောင်း တယောက်ပဲ။ အိမ်မှာ လင်မယားတကျက်ကျက်ရန်ဖြစ်နေပေမယ့် အချစ်ဝတ္ထုတွေ အရေးကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာ ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ အလားတူပဲ… မင်းသမီးတယောက်ဟာ ပရိတ်သတ်ကို ဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်၊ အနုပညာပြည့်ဝသူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူ့ဟာသူ ဘယ်လောက် အိမ်ထောင်ဆက်တွေများများ အနုပညာသည်ကောင်းတယောက်ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ နာမည်အတက်အကျ ဇာတာစန်းလဂ်ဟာ သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝနဲ့ သိပ်မသက်ဆိုင်လှပါဘူး။
လူတယောက်ဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်မှာ သူဘာလုပ်သလဲ၊ သူ့ဝါသနာက ဘာလဲ။ ဒါတွေ ကျနော်နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ စိတ်လည်း မဝင်စားဘူး။
တရားရိပ်သာ မှန်မှန်ဝင်တယ်၊ စနေနေ့တိုင်း ဝတ်တက်တယ် ဆိုပြီး တရားခွင်မှာကျတော့ မတရားဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့၊ ဘက်လိုက်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ တရားသူကြီးမျိုးဆိုရင် အကျင့်စာရိတ္တအရ အင်မတန် အောက်တန်းကျတဲ့ အတန်းအစားထဲကလို့ ကျနော်သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ သူ့မိသားစုအပေါ်မှာတော့ အင်မတန်တာဝန်ကျေတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ကောင်းတယောက်၊ ဒါပေမယ့် ကျောင်းမှာ လျှော့သင်ပြီး ဝိုင်းကျူရှင်တွေကျမှ အသားကုန် အစွမ်းပြတတ်တဲ့ ဆရာမျိုးတွေကိုလည်း ကိုယ့်ကျင့်တရားအရ အောက်တန်းကျတဲ့ အတန်းအစားထဲကလို့ မှတ်ယူပါတယ်။
အနုပညာအရည်အသွေး၊ အားကစားအရည်အချင်း၊ နိုင်ငံရေးအရဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်တခုကို စွမ်းဆောင်ရည်အား စတာတွေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ ဒွေးရောယှက်တင် ရောထွေးစဉ်းစားတာ သဘာဝ မကျလှပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်……… အခုအဖြစ်အပျက်ကြောင့် ထက်ထက်မိုးဦး နာမည်ကျလိမ့်မယ်လို့ ကျိတ်မနိုင်ခဲမရ ဒေါမနဿပွားနေကြသူများ……….. နည်းနည်းလောက်တော့ လျှော့ဦးနော်…လို့ ပြောလိုက်ရပါတယ်ဗျိုး။
ထက်ထက်မိုးဦး ပရိသတ်။း-)
(စာကြွင်း။………။ ထက်ထက်မိုးဦး ပြောတဲ့စကားထဲမှာ မီဒီယာသမား လစာ တပဲခြောက်ပြား ကို သနားလို့ ဆိုတာလေးကို ကြိုက်တယ်။ မှန်သောစကားပဲ။ သတင်းသမားများအနေနဲ့ နာစရာ မလိုပါဘူး။ Positive thinking နဲ့ တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ Wake-up call ပဲ... ကိုယ့်လူတို့။ လစာတိုးတောင်းဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ သတင်းသမားသက်သက်နဲ့ ဝင်ငွေကောင်းတာဆိုလို့ (နိုင်ငံတကာက ကွန်ဖရင့်တွေကို လှည့်တက်နေတဲ့) ဟိုအချောင်သမား အုပ်စုပဲ ရှိမယ်။)
Posted by ကိုပေါ on Monday, May 24, 2010
Labels: in the news Comments: (85)
Posted by ကိုပေါ on Friday, May 7, 2010
Labels: Poem Comments: (15)